UDanilo da Silva Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts
bonkeAbadlali beBhola eKhatywayo baseBelgianAbadlali bebhola baseCroatiaAbadlali bebhola baseDenmarkAbadlali bebhola baseDatshiAbadlali bebhola baseFranceAbadlali bebhola baseJamaniAbadlali bebhola base ItaliyaneAbadlali bebhola basePortugalAbadlali bebhola baseSpainAbadlali bebhola baseSwitzerland
I-Thorgan Hazard Ibali lokuKhula koMntwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Manuel Akanji yobuntwana Ibali leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
ikhaya AMAZIKO EMZANTSI E-AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola baseBrazil UDanilo da Silva Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts
AMAZIKO EMZANTSI E-AMERICA FOOTBALL
Igqityelwe ukuvuselelwa kwi Aprili 15, 2020
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo lebhola yeGhola eyaziwayo ngegama "Dan". Ibali lethu leDanilo da Silva Ibantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuzisa i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, imvelaphi yentsapho, ubuhlobo bentsebenziswano, kunye nezinye iinjongo ze-OFF (ezingaziwa) malunga naye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nobukeka bakhe obubukhali. Nangona kunjalo, bambalwa abambalwa abazi kakhulu ngoDanilo da Silva weBoo enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
UDanilo da Silva Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
Ukuqala, igama lakhe elipheleleyo nguDanilo Luiz da Silva. Wazalwa ngosuku lwe-15th ngoJulayi 1991 kunina, uMaria José da Silva kunye noyise, uJosé Luiz da Silva eBicas, umasipala waseBrazil e-state of Minas Gerais.
Inzala kaDanilo inomthombo wayo eBrazil ubuhlanga obumnyama obunomdla wobandlululo kunye nokulwa indawo kwindawo yaseMzantsi Melika. AmaBrazil ayenempumelelo abamnyama abanjengoDanilo abaye baphumelela ngoku badibana nemitshato exutywe ngenxa yeebhokhwe ezixubekileyo.
UDanilo wakhulela eBicas, umasipala onabantu abangama-13,000 kunye namaxesha angama-3 enyakatho yeRio de Janeiro.
I-Bicas njengoko ifanekisiwe ngezantsi yindawo yokukhangela abantu abaninzi baseTaliyane kunye namazwe ambalwa.
UDanilo da Silva Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts -Qalisa Umsebenzi
KuDanilo osemncinci, ukufuna kwakhe ukuba ngumdlali webhola webhola kwenzelwa izizathu ezifunyenwe kwi-legendary Edson Arantes do Nascimento owaziwayo Pele.
Emva kokuba ekhulile edolophini apho kungenasiphelo ekupheleni kwebhola kwiinyawo zomntu, kwakulula kumntwana oselula uDanilo ukuba akhethe ibhola kunokuba ahambe esikolweni. Ngokufanelekileyo, uDanilo wayeneminyaka eyi-13 ubudala ngeli xesha wayethatha ibhola ngokugqithiseleyo. Uthando lwakhe lwebhola lwambona ebhalweni lwe-2004 ebhalweni lakhe lolutsha, uTupynambás owamnika isigaba sokubonisa italente yakhe. Ngethuba ngeliqela lebhula, ukufunda i-trades of role model and winning time cup cup Cafu ukubonakaliswa kwakhe kumfundisa indlela yokudlala kakuhle isikhundla sakhe.
Emva kweminyaka emibili ephuma kuyo yonke ibhola yebhola eTupynambás, uDanilo waziva ukuba kufuneka adlale ibhola elikhuphisanayo. Wagqiba ekubeni atshintshele e-América Mineiro ecaleni lolutsha elise Belo Horizonte. UDanilo ubona iklabhu ibe yinto ehamba phambili eyayiza kumkhokelela ekuphumeleleni komsebenzi wolu lolutsha.
UDanilo da Silva Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts -Ukunyuka Kwigama
UDanilo eneminyaka eyi-18 wagqiba umsebenzi wakhe wobutsha waza wakhuthazwa waya kwicala eliphezulu lase-América Mineiro. Wavuswa ngaphezu kwazo zonke iinqanaba eziphezulu zebhola emva kokubeka imigomo ebalulekileyo yeqela.
Akuzange kuthathe ixesha ngaphambi kokuba uSantos omkhulu waseBrazil ebizele. Ukuphakama kweMarlo kwaSantos kwafika ngexesha elifanelekileyo. Kwafika ngexesha elifumene umgomo owawunqoba i-2011 Copa Libertadores (i-South American ilingana ne-UFA Champions League - ngokokuqala ngqa ukususela kwi-1963). Ngezantsi umfanekiso weselula omdala uDanilo kwi-Copa Libertadores.
Ukususela ekuzuzeni iCopa Libertadores ecaleni Neymar (echazwe ngezantsi nge-trophy), ukukwazi kukaDanilo ukujongana nodumo kuye kwaxhomekeka ngokuthe ngqo kwindlela awaphatha ngayo ibhola.
Kwakhona kwakukho amaxesha amaninzi amaqela aseYurophu amqaphela. Njengokuba ku-window ye-2012 ye-transfer window, iiklabhu zaseYurophu zaqala ukubiza iinkonzo zayo. Nangona iqela elikhulu lokukhupha € 50 yezigidi ebekwe entloko yakhe, iCroatia Porto yaya kumsayina, ukuhlawula isigxina esiphezulu kunye nemali yokutyikitya. Le ndlela yayiphupha ngayo iphupha lakhe laseYurophu. Zonke, (ixesha e-Real Madrid naseMan City) njengoko bathethayo, ngoku iimbali.
UDanilo da Silva Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Ngaphambi kwamadoda onke amakhulu, kukho umfazi omkhulu, okanye oko kuthetha. Emva koko uDanilo wayephumelele, kwakukho intombi enhle kumntu kaClarice Sales (echazwe ngezantsi kunye nendoda yakhe) owamlandela umfazi wakhe othandekayo.
Bobabini abathandi banquma ukuba nomntwana ngaphambi komtshato. Babenomntwana wabo, uMiguel ngomhla we-9th ka-Ephreli, i-2015. Ngezantsi nguDanilo nomfazi wakhe omhle kwaye usanda kuzalwa u-Miguel ugubha umkhosi wakhe wokuqala wokudubula ovela kubaba wakhe.
Emva kweminyaka eyi-7 yokuba kunye, uDanilo noClarice Sales bavakalelwa kukuba kwakuyisikhathi sokubopha iqhina. Batshata ngomhla we-17th kaJuni 2017 eBicas, eBrazil.
Bobabini uDanilo noClarice babenomtshato wabo ngaphambi komhla ababeye baceba. Ekuqaleni baqhelisela umtshato wabo ngomhla kaJuni 30, i-2017, kodwa banquma ukwenza ukuba kwenzeke ngosuku lwe-17 lwenyanga eyayiyimini ye-13 ngaphambi komhla wokutshata.
Ngezantsi umfanekiso wabo womtshato kunye nendodana yabo, uMiguel. Njengoko kuboniswe ngezantsi, onke amalungu omndeni kuquka u-Danilo ongeyomncinci ukhangeleka mfutshane kunekheke lomtshato.
UDanilo ukholelwa ukuba unyana wakhe uMiguel (ochazwe ngezantsi) uya kubakhokela isizukulwana sesibini sebhola soDanilo Luiz da Silva.
UDanilo's LifeStyle: Ngaphandle kokungathandabuzeki, indlela yokuphila kaDanilo enokukunceda umntu wakhe umfanekiso ongcono ngakumbi wobuntu bakhe. UDanilo uye wabonwa ngokuqhelekileyo, ujonge ixesha elifanelekileyo kunye.
UDanilo da Silva Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts -Ubomi bomntu
Ukuqala, uDanilo ubonwa ngabalandeli njengomntu ohlala ekhangelelana ngokukhawuleza kunye neefoto kunye nosapho lwakhe.
Ngenxa yoko, uDanilo wayenokuphosakeka njengomntu onokuthi abe nomoya onobungozi. Nangona kunjalo, ukubethelela phantsi, sikunika iinkcukacha ngobuntu bakhe.
Ngokubhekiselele kumandla akhe, uDanilo ubonakala njengontanga njengomntu ogcina into ebalulekileyo kuye. Oku kubonakala kwindlela abambelela ngayo kwintsapho yakhe njengoko kuboniswe kwiifoto zakhe zobomi.
UDanilo ucinga ngokucamngca (ekuphumeni nakwi-pitch), onyanisekileyo (ikakhulukazi kumfazi). Ngokubhekiselele kwinto ayithandayo, uDanilo ungumxhasi wezinto ezithandwayo ekhaya. Uthanda ukuphumla eduze kwamanzi kunye nokutya okulungileyo kunye nosapho. Umqondiso wesitampu somnqamlezo kwisandla sakhe esingezansi ukhombisa ukuba uvela kwimvelaphi yentsapho yamaKatolika.
Ngokubhekiselele kwinto ayithandayo, uDanilo akahlali ekhululekile nabantu abangabazi. Akayithandi naluphi na ukugxekwa kwabazali bakhe kunye nokutyhila ubomi bakhe obuninzi kuluntu. Njengokuba ngexesha lokubhala, omncinci uyaziwa malunga nomntakwabo, udadewabo, oomama okanye oomama (ies).
Njengokuba ngexesha lokubhala eli nqaku, uDanilo onomntu ocebile unelungelo elilinganiselwa kuma-21 ezigidi. Nangona uKafu engumzekelo wakhe, uDanilo wayeke wagxininisa oku okulandelayo ngamazwi akhe;
Ndiyindoda yam. Andiyi kuziqhathanisa namnye umntu ngenxa yokuba ndinamabonakalo am.
QHUBEKA: Siyabulela ngokufunda iDanilo da Silva Ubuntwabali beNdaba kunye ne-Untold Biography Facts. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
Indoda yebhola yebhola yeDlalo
Idilesi yeBhola yaseDaldo
UGabriel Barbosa Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
UGabriel Martinelli Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
URodrygo uya kwiBali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology leNqaku
I-Everton Soares Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
I-David Neres Ibali leNtsana kunye neNgcaciso yeBriography Facts
Ibali leMbali yaseMarquinhos I-Untold Biography Facts
I-Felipe Anderson Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
U-Anderson Talisca Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Vinicius Junior Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
I-Arthur Melo Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
I-Fabinho Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
I-Alisson Becker yabantwana Ibali le-Untold Biography Facts
Umhla oLungisiweyo: nge-28 kaJuni, ngo-2020
Umhla oLungisiweyo: nge-20 kaJuni, ngo-2020
I-Odsonne Edouard Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology ye-Odold
Umhla oLungisiweyo: nge-15 kaJuni, ngo-2020
I-Alex Sandro Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
Umhla oguqulweyo: Epreli 15, 2020
Incwadi ye-Willian yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Iindaba zeDavid Luiz Childhood Plus Plus Untold Biography Facts
Umhla oguqulweyo: Epreli 12, 2020
IGabriyeli Ibali leNtsana yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts